Culimada magaalada Hargeysa iyo Burco oo ka aamusan dhacdada Laascaanood - ARAABINEWS.COM | ARAABINEWS.COM
Culimada magaalada Hargeysa iyo Burco oo ka aamusan dhacdada Laascaanood
Horjooge Muuse Biixi wuxuu magaca beesha ISAAQ ku banaystey xoolaha kumanaan reer Koofur Galbeed isagoo qori caaradii ugu hanjabanaya kaga soo dareeriyay magaalada Laascaanood. Haddaba waxaad is weydiinaysaa waxa aamusiiyay culimada iyo waxgaradka magacooda waxaan lagu samaynayo.
”Way ka hadlaan fanaanad rabta inay ka tunto Hargeysa ama Burco waxa kale oo aad arkaysaa ayagoo maqaaxiyaha iyo hudheelada Burco yidhaa saqdhexe ma soo jeedi kartaan kamana tuman kartaan, waxaadse isweydiin kartaa dadkaan xoolahooda la bililiqaystey iyaga ma soo gasho miyaa diinta ay ka hasdlaan ayuu yiri Xuseen Warsame.
Waxa muuqata in diinta kolba loo adeegsanayo sidii la doono. ”Waxba kama qabaan inay Sacuudfiga ka soo minguuriyaan dhaqankooda laakiin marka shacab Somaliyeed la barakiciyo uma arkaan inay diinta meel uga banaan tahay ma odhan karnaa ayuu is weydiiyay Xuseen Warsame.
Si kastaba ha ahaatee waxaan sugnaa inay falkan wuxuushnimada ah ee ku haboon in jawaab wax ku oola laga bixiyo ay muujiyaan mowqifkooda haddii kale loo qaadan karo inay ku raacsan yihiin falkan diinta ka baxsan.